Easy Japanese in Burmese - Lesson9| NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 9
ဒီနေ့ ပါမောက္ခဆူဇူကီးက အတန်းထဲမှာ ကြေညာစရာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပဲ။
သင်ခန်းစာ9၁ဝ မိနစ်
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 9
NANJI KARA DESU KA
明日、健康診断があります。 မနက်ဖြန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ရှိတယ်။
ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
မနက်ဖြန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ရှိတယ်။
NANJI KARA DESU KA.
ここに８時半に集まって下さい。 မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိပါ။
ဒီနေရာမှာ ၈ နာရီခွဲမှာ လူစုပါ။
GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိပါ။
NAN ဆိုတာက (ဘာ) နဲ့ JI ဆိုတာက (နာရီ) ပါ။ JI ဆိုတာက အချိန်နာရီကို ရေတွက်တာကို ညွှန်ပြပါတယ်။ ဥပမာ NANJI DESU KA (ဘယ်နှစ်နာရီလဲ)တဲ့။
TE ပုံစံကြိယာ အမျိုးမျိုး
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာတုန်းက MASU ကြိယာပုံစံ တွေကို TE ပုံစံအခြေခံပြောင်းနည်း ကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ MASUကို TE ပြောင်းလိုက်ရုံပဲ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ တခြားပုံစံ ပြောင်းနည်းတွေကို လေ့လာပါမယ်။ ဒီပုံစံကတော့ MASU ကို TE ပြောင်းရုံနဲ့ မရပါဘူး။ သူ့ရဲ့အရှေ့မှာပါတဲ့ အက္ခရာတစ်လုံး ကိုပါ ပြောင်းရပါမယ်။
ဂျပန်မှာ ကံမကောင်းဘူးလို့ ယူဆတဲ့ နံပါတ်တွေ ရှိတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ်။ အဲဒါက SHI ဆိုတဲ့ နံပါတ် ၄ ။ အဲဒီနံပါတ်က သေခြင်းတရားဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အသံထွက်တူလို့တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ KU ဆိုတဲ့ နံပါတ် ၉။ ဒါကလည်း ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အသံထွက်တူလို့ တဲ့။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ ဟိုတယ်တွေ ဆေးရုံတွေမှာ အခန်းနံပါတ် ၄ နဲ့ ၉ ဆိုတာ မထားဘူးတဲ့။
သင်ခန်းစာ 8 ကျေးဇူးပြုပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြောပါ။